Ungazifihla njani kwiidrive hard kwiWindows 8.1 | Iindaba zeGajethi
Iindaba ezimnandi zabanye kwaye zinzima kwabanye yile nto sele ikhankanyiwe kutsha nje malunga nohlaziyo olutsha olunokuba nalo iWindows 8.1; Ngokubanzi, iidrive ezinzima ezixhumeneyo ngaphakathi kwikhompyuter kuya kubhalwa ngokuzenzekelayo, Nangona le meko iya kusingathwa phantsi kweemeko ezithile.
Ngaphandle kokuba ziindaba, ngamaqhinga amancinci ekufuneka siwathathile ingqalelo xa sifuna bhala ngokufihlakeleyo iiidrive zethu kwiikhompyuter zeWindows 8.1; lOkanye ukuba kufuneka siqale ngokuthathela ingqalelo, ukuba ngaba senze uhlaziyo ukusuka kwiWindows 8 ukuya kwiWindows 8.1, imeko eya kwahluka kakhulu xa kufikwa ekubetheleni iihard drive, kunokuba sisebenzise isifaki ngendlela ecocekileyo. kule nkqubo yakutshanje yeMicrosoft isebenza.
1 Indlela yokubhala ngekhowudi kunye nokufumana kwakhona isitshixo kwiWindows 8.1
2 Ndingakhubaza njani ukubethela isixhobo
Indlela yokubhala ngekhowudi kunye nokufumana kwakhona isitshixo kwiWindows 8.1
KwiWindows 7 yayisetyenziselwa IBitLocker xa kufikwa ekubetheleni ii-hard drive zethu okanye isixhobo sangaphandle sokugcina (njengentonga ye-USB), into eya kuthi yahluke ngokwahlukileyo kwiWindows 8.1 nangona, ngendlela ethile igcina umgaqo omnye. Ukuba awuyazi indlela yokubethela kunye nesizathu sokuba kwenziwe lo msebenzi Windows 7, Siyakumema ukuba ufunde inqaku elifanelekileyo esalipapasha kwixesha elidlulileyo. Ukubuyela kwimeko yethu, ukuba sifumene ilayisensi yoqobo yeWindows 8.1 kwaye siyifaka ukusuka ekuqaleni (ufakelo olucocekileyo) kwikhompyuter, inkqubo yokusebenza iya kufikelela yenza ikhowudi yokubhala kwiidrive ezinzima, ukunika umsebenzisi iphasiwedi ukuba akwazi ukufumana umxholo wabo kwimeko apho oku kuyimfuneko. Imeko efanayo ayinakwenziwa ngohlaziyo nangona, ngenkqubo enzima ngakumbi, umsebenzisi angabhala ngokulula i-hard drive yabo.
Ekuphela kwento efunekayo kulo msebenzi ukuba wenziwe (ngokweMicrosoft), kukuzama Nxibelelana nekhompyuter kunye neakhawunti yeMicrosoft, Ngubani oza kubamba isitshixo sokubuyisela kwiiseva zabo; Ngale ndlela, ukuba ngexesha elithile ii-hard drive zethu zivaliwe kwaye asinakho ukufikelela kuzo, ukuba neakhawunti ye-Outlook.com inokusithumela le-password nge-imeyile. Umlinganiso wenzelwe ukukhusela ulwazi olugcinwe kwikhompyuter, kwimeko yelahleko okanye ubusela.
Ngoku, umntu unokucebisa ukuba ikhompyuter yethu yeWindows 8.1 ivaliwe ngenxa yokubethela kwidrive hard, ngekhe kubenakho ukubuyisa idatha ekhoyo kwikhompyuter enye. Ngaphambili, ibinokukhutshelwa kwidiski enzima ukuyidibanisa nekhompyuter eyahlukileyo kwaye ke, ukubuyisa ulwazi olukhoyo apho. Ngokwethiyori, ngomsebenzi omtsha uMicrosoft asinike wona, oku ngekhe kuphinde kwenzeke; njengokuba ndazi fumana isitshixo sokufikelela kwi-imeyile kwi-Outlook.com, umsebenzisi kuya kufuneka yiya kwinkonzo kaMicrosoft ukuze ikhowudi ithunyelwe kuwe okanye uvule isitshixo ngomyalezo weSMS.
Ndingakhubaza njani ukubethela isixhobo
NgokukaMicrosoft, akufuneki kubekho isizathu esivakalayo sokukhubaza ukubethela isixhobo, nangona umntu efuna njalo, angenza ngokukhuselekileyo kuseto lweWindows 8.1; Ukuphumeza oku, kuya kufuneka silandele kuphela la manyathelo alandelayo:
Qala iWindows 8.1 kwaye kamva, uye kwi desktop.
Yenza indibaniselwano yesitshixo iphumelele + C ukuzisa ukhetho «Guqula useto lwePC»Kwicala lasekunene.
Ukusuka kwiwindow entsha ebonakalayo, yiya kwinxalenye ye «I-PC kunye nezixhobo«.
Okokugqibela sicofa ku «Ulwazi lwePC«
Yiyo yonke into ekufuneka siyenzile, sikwazi ukuncoma ukuba zonke izixhobo zokugcina ikhompyuter yethu kufuneka zibekwe kwicala lasekunene; Ukuba omnye wabo uvaliwe, kuya kufuneka sicinezele kwiqhosha elifanelekileyo ukuyivula; Ityala elinokubuyela umva linokwenziwa ukusuka apha, oko kukuthi, singacinezela iqhosha ukuze senze ukubethela kwi-hard drive yethu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » software » IWindows 8.1 iya kubhala ngokuzenzekelayo ii-drive zekhompyuter zakho
Iiyure zam zokuqala ezilishumi kunye neTitanfall